Nhau - Edzai nzira yekudzivirira yeinotonhorera
Edzai nzira yekudzivirira yemudziyo unotonhorera
Cooler zvinhu zvakakosha zvekunze zvemapikiniki ezhizha,Chinhu chinodiwa kana iwe uchida kunzwa kutonhora.Saka unoziva sei thermal insulation effect yecoolerwatenga?
Kuchengetedza kutonhora kunowanzo kunzi cooler bag, iyo inogona kushandiswa sefiriji inofambiswa kuchengetedza zvinwiwa zvakatonhora, michero, mukaka wezamu tii, chikafu chegungwa uye zvimwe zvekudya;Inoshandiswawo pakufambisa mufiriji yemishonga, majekiseni uye zvimwe zvigadzirwa.
kuchengetedza kupisa kunowanzo shandiswa pakupisa kwekudya kwekudya, kudya kwemasikati, kuendesa maresitorendi zvichingodaro.
Heat kuchengetedza bvunzo: 8 o 'achi mangwanani achangobika zvokudya bento akaiswa muhomwe kupisa kuchengetedza, uye zipi kuchengetedza, uye ipapo kubuda kushanda, kune kambani pashure nzvimbo pasina mhepo.
Kuma 12 o 'clock, vhura bhokisi rekudya kuti udye masikati, kana kudziya, unoda kudya zvakananga zvakare!Kunesu vanhu vemuhofisi, kunyanya mumakambani asina ma microwave oveni.Nekuti ndiyo yakananga mhedzisiro yeyedzo yekupisa bhegi rekuchengetedza, hapana matanho ekuchengetedza kupisa kunze kwebhokisi remasikati, inoiswa zvakananga mubhegi rekuchengetedza kupisa.Kana iwe uchigona kuisa zvipfeko zvekotoni uye zvimwe zvinhu mubhegi, asi zvakare wedzera iyo thermal insulation effect!(Inoenderana nekupisa kwekunze).
Cherechedza: Pazuva rekuedza, kumwe kudya kwemasikati nekudya kwakafanana hakuna kuiswa mubhegi rekudzivirira.Mushure menguva imwe chete uye munzvimbo imwechete, nyama mubhokisi rekudya yakange yakaomeswa nechando uye muto waitonhora usina kupisa.
Cold test: Shandisa nebhokisi rinotonhorera.Isa cooler bag sandara mufiriji kana mufiriji.Mushure mechando, isa mubhegi rinotonhorera uye uise pamusoro kana parutivi rwezvokudya, zvinwiwa, michero nezvimwe zvinhu, uye simbisa zipi.Zvinotora anenge maawa matanhatu kuti chinotonhorera chinyunguduke zvachose, chichisiya chikafu nechinwiwa mukati senge chakachena kubva mufiriji.
Nyaya dzinoda kutariswa:
Chengetedza ice cream uye zvimwe zvikafu zvakanyungudutswa zviri nyore kwemaminetsi makumi matatu kusvika makumi matanhatu sezvakakurudzirwa.Zvinokurudzirwa kuti uremu hunorema husapfuure 3KG. Mhedzisiro yekuchengetedza kupisa kunoenderana nekushanduka kwekushisa kwekunze kwekunze kwenyika, huwandu hwemukati, uye shanduko yekushisa kwepakutanga.
Nguva yekutumira: Kubvumbi-08-2022